यदी रबी लामिछानेलाइ लागेकाे आराेप प्रमाणित भए के सजाय हुन्छ ? - Maxon Khabar
Home / News / यदी रबी लामिछानेलाइ लागेकाे आराेप प्रमाणित भए के सजाय हुन्छ ?
यदी रबी लामिछानेलाइ लागेकाे आराेप प्रमाणित भए के सजाय हुन्छ ?
२०७६ साउन ३, १ चितवन
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्युप्रकरणमा मुछीएपछी न्युज २४ टिभि का पत्रकार तथा सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रम संचालक रवि लामिछाने यतीखेर प्रहरी हिरासतमा रहेकाे छन । रबिलाइ हिजाे राती नै प्रहरीले अुसन्धाकाे लागी चितवन ल्याइएकाे थियाे । चितवनमा रबिकाे रिहाइकाे माग गर्दै ब्यापक नाराबाजी भएकाे छ । साथै रबिकाे समर्थनमा नाराबाजी गर्ने केही युवाहरूलाइ प्रहरीले पक्राउ समेत गरेकाे छ । आज शुक्रबार जिल्ला अदालत चितवनले सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछाने सहित तीन लाई ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले बताउनुभयाे ।
यदी आराेप प्रमाणित भए रबिले कस्ताे सजाय पाउछन ?
मुलुकी फौजदारी संहिताले आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाकै एक पाटाे मानेको छ। रबीलाइ लागेकाे आत्महत्या दुरुत्साहन आराेप प्रमाणित भए प्रहरीले कानुन बमाेजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तर्गत आत्महत्या दुरुत्साहन अभियाेगमा ५ वर्ष सम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेकाे छ। पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले गत साउन २० गते चितवनकाे एक हाेटलमा आत्महत्या गरेका थिए।
उनले प्राण त्याग्नुपुर्ब रेकर्ड गरेकाे साे भिडियोमा लामिछाने सहितकाे टिमले आत्महत्याका लागि बाध्य पारेको बताएका थिए। यध्यपी रबीका समर्थकहरूले भिडियाे शंकास्पद रहेकाे र रबिलाइ फसाउन षडयन्त्र भएकाे बताएका छन । रबिले यस अगाडी साे काणडमा कुनै संलग्नता र यदी आराेप प्रमाणित भए कानुन बमाेजीम साजय भाेग्न तयार रहकेा बताएका थिए ।